13 argagixiso oo lagu dilay Duqeyn ka dhacday Puntland | Somali National Television - sntv.so
Home ARGAGIXISADA 13 argagixiso oo lagu dilay Duqeyn ka dhacday Puntland
13 argagixiso oo lagu dilay Duqeyn ka dhacday Puntland
Muqdisho (SNTV)- Taliska Ciidamada Mareykanka ,gaar ahaan qeybra Africom ayaa dilay 13-argagixiso oo ka tirsanaa kooxda daacishta Soomaaliya,ka dib kolkii duqeyn xagga cirka ah ay ka fuliyeen Buuraha Golis ee deegaanada maamulka Pubti land.
Saraakiisha taliska Africo ayaa goor dambe oo Khamiis ah sheegay in duqeyn ay ciidamadaasi sameeyeen maalinimadii Arbacadii lagu bartilmaameedsaday xero ku tiillay Buuraha Golis,halkasi oo ay ku sugnaayeen argagixisada kooxda Daacish.
Duqeyntan lala beegsaday argagixisada Daacish ,ayaa daba joogta weerar ka dhacay gobolka Sh/Hoose oo lagu dilay 3-maleeshiyo oo ka tirsanaa Al-Shabaab.
Taliska Africom ayaa sheegay in Qiimeyn lagu sameeyay weeraradaasi xagga cirka ah ay muujinaayaan in la dilay 13,argagixiso,isla markaana aysan jirin waxyeello kale oo looga baqaayo in ay ku timid dadweynaha.
Ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa xoojiyay weerarada dhinaca cirka ah ee lala beegsabaayo kooxaha argagixisada,waxaana tan iyo markii uu talada dalka Mareykanka uu qabtay Donald Trump la sheegay in duqeyn lagu dilay 8-boqol oo maleeshiyo ah.
Previous articleGuddoomiyaha Marka oo sheegay in ay Argagixisadu naf bax yihiin oo aysan mudnayn in la buunbuuniyo warkooda
Next articleRa’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka oo ka tacsiyeeysay geeridii ku timid Marxuum Xaaji Cabdikariim Xuseen Yuusuf